Monday, 11 Nov, 2019 3:37 PM
२५ कात्तिक, काठमाडौं । अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई लिन डडेल्धुरा पुगेको हेलिकप्टर रित्तै फर्किएको छ । केसीले काठमाडौं आउन अस्वीकार गरेपछि उनलाई लिन गएको हेलिकप्टर रित्तै फर्किएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले केसीलाई काठमाडौं पठाउन सोमबार विहान गृह मन्त्रालयसँग हेलिकप्टर माग गरेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर डडेल्धुरा पुगेको थियो ।
तर डा. केसीले काठमाडौं जान अस्वीकार गरेपछि फेरि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर हेलिकप्टर फिर्ता गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुग भएको र मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टले पनि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजानुपर्ने भनिसकेपछि हेलिकप्टर मगाएको उनले बताए । केसीलाई लिन सेनाको हेलिकप्टर पुगेपछि सोमबार विहान डडेल्धुरामा डा. केसीका समर्थक र प्रहरीबीच तनाव अवस्था सिर्जना भएको थियो । लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले डा. केसीका समर्थक तथा नागरिक समाजसँग सर्वपक्षीय बैठक राखेका थिए ।
बैठकमा डा. केसीका समर्थकले उनको सहमतिविपरीत कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताएका थिए । डाक्टर केसीले माग पूरा गर्नासाथ अनशन तोड्छु भन्दै अडान राखेपछि हेलिकप्टर फिर्ता भएको हो । अस्पतालले आफूलाई नसोधेरै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेकोप्रति डा केसीले आपत्ति जनाएका छन् । उनले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा जितेन्द्र कँडेलसंग असन्तुष्टि पोख्दै भने ‘म यहाँबाट जाँदै जान्न । म आफ्नो उपचारको लागि आएको होइन, जनताको अधिकारको लागि अनसन बसेको हुँ, जनताको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म जाँदैन ।’